Ngo Beauty Salon ukhophe zonke ukuzuza in ukuthandwa. Anezinhlaka nge aminyene eyelashes Fluffy amehlo wenze ezinhliziyweni zabantu beat ngokushesha. View obumangalisayo ngempela. Inkosi omuhle uyazi ukuthi ukuba yi ephelele futhi iqine kubaluleke kakhulu ukuba akhethe okuhle material izinga esetshenziswa. Glue for eyelashes Duo ikufakazele uqobo kanye eyenzekile yayo eqinile emakethe yezimonyo.
I ingcina ekhethiwe, ngokuyinhloko esekelwe uhlobo kanye nomthamo starting impahla. Oluthathwa by the polymerization kanye nokusungulwa.
Anenhlaka - lolu hlobo glue lasendulo yasetshenziselwa ngisho okhokho bethu. isisekelo wayo resin zemvelo. Wazimisa futhi ngokuphephile inamathela nemivimbo engu, kodwa kungabangela komzimba. The main inzuzo - the engokwemvelo ephelele ukwakheka. kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe i-classical poresnichno umthamo.
Silicon - ngesisekelo abicah. esobala ngokugcwele, okuhlala isikhathi eside kakhulu futhi hypoallergenic ngokuphelele. Advantage - ukumelana amanzi ezizihluphayo efanayo.
Rubber - isisekelo ngokukhethekile kusetshenzwe zenjoloba. Izinzuzo zihlanganisa izindleko zalo ongaphakeme nokuzabalazela ezinhle. Ikhishwa ikakhulu abamnyama. ukuphendula Allergic akuvamile.
Latex - kokokunamathisela ezidume kakhulu ugongolo wokunweba. Ngokuqina ubambe ukhophe izinyanda ngokusebenzisa ingxenye ukubunjwa iraba yayo powder, kulula ukugqoka, kulula ukususa ngeminyaka, ke akakubangeli komzimba. Ukubunjwa kokokunamathisela for eyelashes Duo-latex.
Polymerization - izinga lapho inhlaka ukuze ome esikhumbeni. Ezimweni eziningi luncike ukuminyana umkhiqizo. glue anenhlaka bome eside kunabanye, kodwa okuhlala isikhathi eside ukugqoka. Rubber futhi abicah unamathele isikhumba ukhophe 3-5 imizuzwana. Indlela esheshayo kulesi sici - ingcina professional abicah ezisekelwe. Izinga of solidification 1 - 2 imizuzwana. Umthetho main lapha - engxenyeni mkhulu, isikhathi eside kuthatha ukuze ome.
Indlela ukunamathisela eyelashes
Inqubo ukhophe izandiso abiza imali futhi ukulungiswa nyangazonke, ngakho amantombazane amaningi ukufundephi ukwenza ngokwakho. Poresnichnoe umthamo lokufeza kunzima ekhaya, kodwa ugongolo kuyizinhlayiyana okukhethwa kukho ekahle. Glue for eyelashes Duo iyona kangcono ngokunembile ukuqaliswa yayo.
Lokhu ingcina kokuba ngokwesilinganiso polymerization degree futhi ihlala isikhathi eside kakhulu. Ungathenga noma ngayiphi izimonyo esitolo ezikhethekile noma ngaphambilini ku-intanethi.
Cabanga ngesinyathelo inqubo ngesinyathelo:
- eyelashes kungenziwa ethe njo ngaphambi kokufaka isicelo makeup noma umnqopho wayo wokugcina;
- kulandele kufaneleka - eyelashes yokufakelwa zisetshenziswa onqenqemeni leso, izincwadi ngobude ukuma;
- usebenzisa primer (degreasing ejenti) ukusula bonke ubuso oyifunayo, kuhlanganise izinwele;
- kweqembu eyelashes yokufakelwa sizikhandle ethunjwa yebhangqa amashiya, onqenqemeni iconsi encane glue sisetshenziswa futhi uvumelanise sisetshenziswa indawo oyifunayo on the ijwabu leso;
- Duo eyelash Yesigcilikisha seyomile ngokushesha, ngakho kudingeka alungiselele kusengaphambili indaba, waqale nomunye bese nomunye leminyaka, ekupheleni isheke wesimethri, futhi uma kudingeka dokleivaem eyelashes ezindaweni kwesokudla.
Izimfihlo efanele gluing eyelashes
glue kungekho nto enemibala emihle ngoba Eyelashes Duo has omningi okubuyayo. Lover phezulu cilia kakade asazisa futhi bakhomba eziningi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ezenza ukusetshenziswa ingcina kahle ngangokunokwenzeka.
Ukuze glue kudliwe kwezomnotho, akudingekile awubeka pre ukotini swab noma isandla. Kungcono qhubeka kanjalo itjhubhu, ke azwela umfutho ingcina isamba ngokweqile ukuchayeka emoyeni esebuyela ku tube.
Lubricating ngentambo ukhophe glue, ukunakekelwa okukhethekile kufanele zikhokhelwe ithiphu, ukwenza ngcono mountings yabo.
Ukuze cilia ngokushesha udonsa ekhulwini, hhayi ezigcotshwe ke, kuzomele ulinde isikhathi imizuzwana 15-20. Lena imfuneko.
Ngezinye gluing eyelashes ukusebenzisa kangcono indlebe induku. Uyoze ngobumnene ukusabalalisa intambo ubudala futhi bambelela kuye.
Ngosizo a swab ukotini kulula ukususa cilia kusihlwa. Enough ukumanzisa ke emanzini bese ubamba kanye banamathela onqenqemeni engezansi kwekhulu.
Lo mkhiqizo ithengiswe ebhokisini amakhadibhodi tube encane enesisindo nje 14g Wenziwe ngombala omhlophe futhi esikhulu umbhalo oqoshiwe duo ingcina. Glue for eyelashes brand sibonisa itjhubhu tapered lula ukusetshenziswa. On the ngaphakathi ebhokisini has zonke iziqondiso ezidingekayo nge izithombe kwi uhlelo lwayo lokusebenza. Ngemva lokusebenza engalweni yakhe emhlophe ngokushesha liphenduka esobala, akusho isivumelwane isikhumba, has dim iphunga zamakhemikhali, ubalekela kwamaminithi ambalwa. Uma uthi nhlá kubukeka sengathi ngamapayipi amancane glue, kodwa wachitha kwezomnotho kakhulu. Ngekusetjentiswa nsuku zonke, lokhu ivolumu kwanele kwengxenye yonyaka noma nakakhulu.
Ngokungafani umthamo poresnichno, ugongolo futhi iteyipu izindlela mancane eziyinkinga, njengoba lisetshenziswe kafushane. Duo ukhophe ingcina ngokubamba eyelashes ngokuqinile usuku lonke, ngaphandle kokuphatha kabi. Inqubo izidingo zomkhaya ongako ukwakha silula, kodwa ukuhlola ngokwabo ku propensity ukuba komzimba namanje zinkulu. Kungase kubangele ingcina nje kuphela kodwa futhi indaba lapho cilia. Ngakho-ke, ukuze bagweme izinkinga ezingadingekile ukunamathisela cilia eziningana azungeze amehlo kulo lonke usuku ukubukela ukusabela isikhumba.
Umthamo kwanoma yiluphi uhlobo akuvunyelwe contraindicated eyelashes amantombazane nge izifo ezifana conjunctivitis, nezinye izinhlobo pathologies ocular.
izindleko Esamukeleka, ukusetshenziswa kwezomnotho kanye izinga eliphakeme ukumelana kuhlukile ziqhathaniswa nezimbangi zazo ingcina for eyelashes Duo. Izibuyekezo abathengi kanye master ukwakheka iphuzu ukuze eziningi eziwusizo esingokwemvelo kuye:
glue Kulula kakhulu ukususa;
Akukona kubangele komzimba;
isikhathi polymerization ezinhle;
Ingasetshenziselwa lapho egqoke contact lens;
Njengoba yayazi indlela elula ezinjalo ukuze azakhele umuzi omuhle ka cilia, ungashintsha nsuku zonke, okwenza kube bheka amadlingozi, impungushe zobuqili noma ikati. Lokhu kukuvumela ukuba sibheke ephelele njalo, ezithinta ezungezile eyelashes obukhulu.
"Lumen". SS-ayisikhilimu. Izibuyekezo mayelana omunye yimpumelelo kakhulu imikhiqizo emisha
Plums - siyini lesi isiko? incazelo
Jeep "Lamborghini": izimoto wezempi ukusetshenziswa ezisetshenziswa umphakathi
Babecwiliswa blender Philips HR 1377: ukuqhathanisa nozakwabo kanye nokubuyekeza
Sodium sulfate - kusho okuhlanza emathunjini